Pakistan oo ka goconeysa Askar uga dhimatay howlgalkii rejo-soo celinta ee Soomaaliya! - Awdinle Online
Pakistan oo ka goconeysa Askar uga dhimatay howlgalkii rejo-soo celinta ee Soomaaliya!
Maanta oo ah 29-ka May waxa ay ku beegan tahay markii loo gooni yeelay maalinta lagu xasuusanayo Ciidamada ragga iyo dumarka ah ee ku howlan nabad ilaalinta dalalka aan xasiloonayn ee heysta ogolaanshiyaha Qaramada Midoobay.
Askartaan waxa ku yabooha dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay, waxaana lagu maareeyaa dhaqaalaha Golaha ee miisaaniyadda gaarka ah si ay uga qayb qaataan xasilinta wadamada colaaddu sokeeye ka taagan tahay iyo dalalka muranka xuduuddu dhexmaray ee sababa gacan qaad.
Fariinta sanadkaan waxaa cinwaan looga dhigay “Ragga iyo Dumarka u istaagay Nabad ilaalinta waa furaha Nabadda”, waxaana wadamada ku deeqay ciidamada madaxdooda fariin ku saabsan howlgalka ay ku maqan yihiin ay la wadaagaan Askarta kale iyo ehelkooda.
Gen. Qamar Javed Bajwa Taliyaha Ciidamada Pakistan oo ka hadlay Munaasabaddan ayaa uu soo hadal qaaday Ciidamada Nabad illaalinta Qaramada Midoobay oo ay Dowladdiisu ku ku yaboohday.
Waxa uu ka sheekeeyay muhiimadda maalintaan ay leedahay in naf huridda ay sameynayaan Askarta Pakistan ee ku sugan dalal kala duwan iyaga oo xiran Koofida Buluugga ah ee Qaramada midoobay.
“Qorshaheenu waa in aynu nafteena u hurnaa badbaadinta dalalka si nabad ilaaliyaasha ay dib ugu soo celiyaan xasiloonida oo ah waxa uu dal waliba u baahan yahay, waanta tan lagu dhiiragelisay in aynu ku dhaqaaqo Gobol waliba ha ugu yaalee tagista wadamada dhibka laga soo sheego” ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Pakistan Qamar Javed.
Waxa uu tiriyay dalalka ay geeyeen Ciidamada Pakistan ee Nabad ilaaliyaasha Qaramada Midoobay katirsan, Askartooda ayuu ku amaanay in si wanaagsan ay ula dhaqmeen dadka shacabka, iyaga oo ilaaliyay xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dalalka ay tageen.
“Pakistan waxa ay ku biirtay howlgalka Nabad ilaalinta Qaramada Midoobay sanadkii 1960-kii, tan iyo waqtigaas askarteena waxaa la geeyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Koofurta Suudaan, Gobolka Daarfuur, Abyei oo ah halka u dhaxeyso labada Suudaan, Soomaaliya, Galbeedka Saxaraha, Maali iyo Qubrus oo ku hoos shaqeeyaan Calanka Qaramada Midoobay” ayuu sii raaciyay Taliyaha Ciidanka Pakistan.
Taliyaha ayaa xusuustay dhibaatooyin Ciidankooda ay kala kulmeen dalalka ay ka howlgaleen,si gaar ah Soomaaliya ayuu dib u xasuustay howlgalkii UNOSOM ee sanadkii 1993-dii oo lagu dilay askar u dhalatay dalkaas.
Bishii June sanadkii 1993-dii, 24-Askari oo katirsan howlgalkii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya UNOSOM una dhashay dalka Pakistan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay Magaalada Muqdisho, wixii dilkaas ka dambeeyay waxaa dhacay isku dhac dhexmaray askartii Qaramada Midoobay iyo kooxihii hubeysnaa oo sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray rayid iyo askarta.
Dhanka kale, fariin uu soo diray Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres waxa uu geesiyaal ku tilmaamay askarta xiran Koofida Buluugga ah ee Qaramada Midoobay, waxa uu ku tilmaamay naftood hurayaal u taagan badbaadinta dadka dhibka loo geysto.
“Waxa aan u dabbaal dageynaa sanad guurada 20-aad ee Golaha Ammaanka tirsigiisu yahay 1325, Haweenka iyo Ragga nabad ilaalinta ku jira waa geesiyaal mudan doorkooda in lagu amaano, waa in la helaa nabadgelyo iyo matalaadda Dumarka, aynu wadno shaqada nabad ilaalinta, waa in aynu ka adkaanaa Musiibada oo aan dhisnaa Mustaqbal wanaagsan” sidaasi waxaa yiri Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres.
Muddo 16-sano ah Pakistan waxa ay fooqa sare kaga jirtay dalalka ugu badan ee ku deeqay howlwadeenada iyo askarta Qaramada Midoobay, tan iyo xiligaas la diiwaangeliyay 200,000 oo askari oo ay geystay Qaarad waliba oo caalamka.
Isha: Tribune.com.pk / UN / https://awdinle.com/
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad “Madaxda dowladda kama hadlin dhacdadii deegaanka Gololey,
Next article5 eray oo ay dhibsatay’ Villa Somalia oo shaqadiisa ku waayey Dr. Walters Samah